You are at:Home»WARARKA»Maalinta AIDS-ka Oo Muqdisho Laga Xusay "Sawirro"
By somnews on	 December 1, 2015 WARARKA
Munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee AIDS-ka Adduunka oo 01-da December ku beegan ayaa waxaa lagu qabtay Muqdisho, iyadoo ay kasoo qayb-galeen masuuliyiin ka tirsan Labada gole ee Dowladda, Xubno ka mid ah heya’daha caalamiga ah ee ka howlgala dalka culummaa’udiin, dhallinyaro, haween, dadka la nool HIV/ADIS-ka iyo marti-sharaf kale.
Munaasabadda oo dadkii ka hadlay ayaa ka jeediyeen hadalo ayaa aad ugu dheeraaday ka sheekeynta dhibaatada Cudurkani AIDS-ka, iyo sida loogu baahan yahay in bulshadeena looga wacyigaliyo.
Wasiirka Caafimaadka Xaawo Xasan Maxamed oo munaasabadaasi ka hadashay ayaa sheegtay in ka wasaarad ahaan ay dadaal ku bixin doonto sidii loo heli lahaa xaruumo lagu daryeelo dadka la nool Cudurkani.waxaana ay sheegtay Soomaaliya in ay ku nool yihiin dad badan oo qaba AIDS-ka oo aan helin wax daryeel ah.
Wasiirada oo sii hadashay ayaa sheegtay in xil ay iska saari doonto daryeelida dadka la nool cudurka HIV AIDS-ka ayna ka saacidi doonaan waxyaabaha muhiimka u ah aadanaha.
Sanad walba maanta oo kale ayaa Soomaaliya iyo Aduunka oo dhan laga Xusaa maalinta AIDS-ka aduunka, waxaana cudurkani oo lagu sheegay mid dilaa ah la sheegay in Soomaaliya sanadihii dambe uu ku soo badanayay dadka la nool cudurkaasi Ilaah ha inaga dhowree Dhibkiisee.